Umaki: umbhalo ukuze ubhalise | Martech Zone
Maka: umbhalo ukuze ubhalise
Umngani omuhle nozakwabo, Megan Glover, manje usenguMqondisi Wezokukhangisa eDelivra. UDelivra ungumhlinzeki wesevisi ye-imeyili onedumela eliqinile lokusiza amakhasimende akhe lapha esifundeni. Baphinde baqanjwa njengenye yezinkampani ezihamba phambili ukusebenza e-Indiana. Muva nje, iDelivra ibambisene nomngani omkhulu, u-Adam Small, oyi-CEO ye-Connective Mobile - inkampani yezobuchwepheshe besimanje neyokumaketha. Ngokubambisana ne-Connective Mobile, uDelivra wethule